Oké mmiri ozuzo: njirimara, nhazi na nsonaazụ | Netwọk Mgbasa Ozi
Na mbara ala anyị enwere ụdị mmiri ozuzo na-adabere n'ụdị, mbido na nsonazụ ya. Otu n'ime ha bụ ebe okpomọkụ. A maara ya dị ka oké ifufe nke ebe okpomọkụ na usoro ihu igwe na-enwe nrụgide dị ala nke ifufe na-agbagharị gburugburu eriri etiti ma nwee mgbasa ozi mechiri emechi. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ihe na - emebi ma ọ bụrụ na - egbu oge.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oke mmiri ọkụ, njirimara ya, mbido ya na nsonazụ ya.
2 Tropdị oké mmiri ozuzo
3 Ihe si na oke ifufe nke ebe ugwu
4 Nsogbu Tropical, ajọ ifufe na aha
Mgbe anyị na-ekwu maka oke ikuku mmiri, anyị na-ezo aka na usoro ihu igwe ebe nrụgide dị ala kachasị. Ifufe dị oke ikuku ma na-agagharị gburugburu etiti dị n'etiti mgbasa ozi mechiri emechi. N'ihi ya, Ebili mmiri ndị a niile na-enweta ume site na odide nke ikuku mmiri na isi ọkụ. Isi nke oké ifufe ndị a na-ekpo ọkụ ma na-emepụta nrụgide dị ala ebe ọ bụ na ikuku na-ekpo ọkụ na-ebili ma hapụ ohere n'etiti akụkụ nke ikuku. Ndalata a na nrụgide na-eme ka ike ikuku ndị gbara ya gburugburu “jupụta” oghere nke ikuku ọkụ na-ahapụ.
Ihe a niile na - eme ka ikuku na - efegharị ikuku, na - ebupute oke ikuku. Oké ifufe ahụ na-enweta ume nke odide nke ikuku mmiri ma na-ejikarị mmiri ozuzo na ifufe siri ike. Ike na ogo mbibi nke ikuku ndị a dịgasị iche dabere na ike ike ha nwere. Tụkwasị na nke ahụ, na-adabere n'otú o siri sie ike, a na-eme ka ịda mbà nke ebe okpomọkụ pụọ na oké ifufe na ebe okpomọkụ. Offọdụ n'ime oké ifufe ndị a na-enwekarị buru ibu nke na a pụrụ ịhụ ha site na mbara ikuku nke ụwa. Ya bụ, ndị na-agụ kpakpando nwere ike ịhụ ifufe mmiri si na mbara igwe.
Tropdị oké mmiri ozuzo
Ma otu oke ikuku mmiri bu udiri okpomoku ndi ozo, enwere otutu uzo di iche iche nke emere, dika aha ha na egosi, na ogbe. Oké ifufe na ajọ ifufe dabara n'ụdị a. Ka anyị lee ihe ụdị mmiri ifufe dị iche iche dị:
Oke mmiri ozuzo: a haziri ha na latitude dị elu karịa ogo 30 site na igwe ikuku abụọ ma ọ bụ karịa dị iche. Ndi mmadu a nwere otutu oku.
Pola cyclones: ha nwere mkpụmkpụ ndụ ma bilie na mpaghara polar.
Sublon cyclones: ha nwere njirimara nke etiti n’etiti uzo abuo gara aga.
Banyere nguzobe ya, oke mmiri ozuzo na-ewere ọnọdụ n'oge dị mma nke afọ, ebe ọ chọrọ nnukwu ọnụọgụ nke anwụ. A na-ebutekarị ha n'oké osimiri mgbe obere ifufe na-enweta ume site na evaporation nke mmiri ọkụ n'elu oké osimiri. Dị ka ọ na-adịkarị, ọ na -emekarị n'oge mgbe okpomọkụ dị elu ma ọ bụ oke radieshon nke anyanwụ. Ihe niile a na - eweta ihu mmiri na - ekpo ọkụ ma na - asọ ma na - eche ihu n'ihu ikuku oyi na-akpata ma na-agbagharị na a nkịtị axis. Kwuru na ọ dị na mpaghara etiti ma mara aha anya oke ifufe ahụ.
Okirikiri ahụ na-ekwughachi ka ebili mmiri na-enweta ume ma na-akwagharị. N'ụzọ dị otú a, a na-ebute ihu mmiri ozuzo na oké ifufe. Oké ifufe Tropical na-enweta ike na mmiri ọkụ ma tufuo ike na ala. Oké ifufe nke ebe okpomọkụ bụ ihe omimi nke ihu igwe nke na-eme mgbe ihu mmiri ikuku abụọ zutere n'ọnọdụ pụrụ iche: ikuku na-ekpo ọkụ na ikuku oyi "na-asọ" ibe ha.
N'aka nke ọzọ, mgbe ha banyere na kọntinent ahụ, ike na-agwụ ha ma na-efesasị n'ihi nkwụsị nke mgbasa nke ikuku na-ekpo ọkụ na oyi.
Ihe si na oke ifufe nke ebe ugwu
Oké ifufe nke Tropical nwere ike ịkwụsị ndụ ọtụtụ mmadụ. Ọ bụrụgodị na ha abụrụghị ajọ ifufe, oké ifufe nke ebe okpomọkụ nwere ike ibibi ndị bi na ya nnukwu. Mmetụta ha pụtara ìhè karịsịa na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, ebe ọ bụ na ifufe siri ike na-ebugharị ha, nwere ike ịkwatu ihe, bulie ebili mmiri n'ụsọ oké osimiri ma ọ bụ mepụta oke mmiri ozuzo nke nwere ike ịkpata idei mmiri.
Ihe a niile nwere ike ịta isi ọtụtụ mmadụ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ adịghị njikere ma attaa ntị na ọnọdụ ihu igwe dị oke njọ, ọghọm nke ihe onwunwe na-adịkarị njọ ma mgbake nke mpaghara ndị emetụtara nwere ike were ogologo oge. N'ụzọ dị iche, cyclon nwerekwa mmetụta dị mma na ihu igwe ụwa: buru mmiri ozuzo gaa na mpaghara ala kpọrọ nkụ ma ọ bụ ala mmiri. Ya mere, ha na-ekwu okwu n'ụzọ na-enweghị isi na-akwalite iru mmiri nke ala ndị ọ ga-abụ na ọzara agaghị adị, dị ka ndịda United States ma ọ bụ Japan.
Oke ikuku kachasi ike nke uwa mere na ngwụcha oge ọkọchị, mgbe oke osimiri dị ọkụ. Ọ bụ ezie na mpaghara ọ bụla nwere ike iweta oke ikuku ya na oge ya, a chọpụtala ya na n'oké ifufe, Mee na-abụkarị ọnwa kacha nta, mgbe ọnwa Septemba bụ ọnwa kacha ekwo ekwo. Nke a bụ n'ihi ihe mmegharị ahụ. Ka mmiri dị n’oké osimiri kpoo ọkụ, ọ ga-anọrịrị oge ọkọchị niile. N'ụzọ dị otú a, oké osimiri ga-adị ọkụ n'oge ọnwa nke ọnwa Septemba ma ọ ga-ebute ọnọdụ dị mma maka ọgbọ nke oke ikuku nke ebe okpomọkụ.
Nsogbu Tropical, ajọ ifufe na aha
A na-akpọ oké ifufe Tropical ka ha nwee ike ịmata ha n’oge njem ha, maka nke a ka eji aha ndị mmadụ, ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke. A họpụtara ha n’usoro mkpụrụ akwụkwọ nke mbụ wee gaa n’usoro nke oge oké ifufe. Ya mere, ọa na-akpọ nke mbụ A, nke abụọ na-akpọ B, na na.
Mmetụta nke Tropical na-abanye n'oké ifufe site n'inweta ume. Nsogbu ndagwurugwu bụ ụdị adịghị ike ikuku kacha adị adị. Ifufe ya nwere mgbasa mechiri emechi nke ruru 17 mita kwa nkeji, ọ bụ ezie na gusts nwere ike iru ọsọ ọsọ dị elu. Ọ bụrụ na nrụgide dị ala (nke a na-akpọ n'ihi na ha bụ usoro maka nrụgide dị ala) nweta ume na mmegharị, ha ga-aga n'ihu na-eto eto ruo mgbe ha ghọrọ oké ifufe nke ebe okpomọkụ na-agba ọsọ ọsọ n'etiti 17 na 33 mita kwa nkeji.
Ajọ ifufe bụ nke kachasi ike n’etiti ajọ ifufe nke ebe okpomọkụ. Ha na-ebido n’oké ifufe nke ebe okpomọkụ ma na-enweta ume ruo mgbe oke ikuku n’abụghị ma ọ bụ karịa mita 34 na nke abụọ. Dị ka Saffir-Simpson si kwuo, A na-ekewa ajọ ifufe na ọkwa 3, 4 ma ọ bụ 5 dabere na ike ikuku ndị a.
Typhoons na-eme kwa oge ma na-eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ, dịka ụsọ oké osimiri nke Hong Kong. Enwere ike iji aha a kpọọ nkụda mmụọ, oké ifufe na ajọ ifufe, n'ihi na okwu ahụ na-ezo aka n'oge nke ihe omume ihu igwe ndị a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke ifufe na ebe okpomọkụ na njirimara ya.